Martin Bashir wuxuu si adag u adkeysanayaa in wareysiga Diana Panorama - Jowhar somali news leader
By hanad	 On May 23, 2021
Martin Bashir wuxuu si adag u adkeysanayaa in wareysiga Diana Panorama ‘uu ahaa sidii ay iyadu rabtay’ waxayna tiri ‘isaga masuul kama noqon karo waxyaabaha kale ee nolosheeda ka dhacaya’ – laakiin waxay qiraysaa inuu ‘qaldanaa’ hadalada been abuurka ah.
Weriye xishoodka leh ee Martin Bashir ayaa ku adkeystay wareysigiisii ​​Panorama ee 1995-kii uu la yeeshay Princess Diana ‘inuu ahaa sidii ay iyadu rabtay’ – laakiin wuxuu qirtay inuu ‘ku qaldanaa’ inuu been abuurto bayaannada bangiga.
Sumcadda saxafiga ayaa kala daadsan kadib warbixintii Lord Dyson ee ahayd inuu adeegsaday ‘dabeecad khiyaano leh’ si uu u helo adduunkiisa gaarka ah.
Laakiin markii uu jebiyey aamusnaanti wareysiga ka dib dib u eegistii bambaanada, Bashiir wuxuu u sheegay The Sunday Times in Diana aysan waligeed ku faraxsanayn nuxurka wareysiga ayna sii wadeen saaxiibtinimadooda kadib baahinta.
Wuxuu yiri ‘waligiis ma dooneyn inuu waxyeelleeyo’ amiiradda, isagoo ku andacoonaya: ‘Waan jeclaaday iyada.’
Isaga oo la hadlaya wiilasha amiirrada ee Princes William iyo Harry – oo labaduba soo saaray qoraallo qarxinaya khiyaanada iyo qarinta BBC-da – Bashiir wuxuu yidhi ‘aad ayuu uga xumahay’.
Wuxuu yidhi ‘ma qiyaasi karo waxa qoyskoodu dareemayo maalin kasta, in kasta oo aan ogahay in yar oo aniga ka mid ah aniga oo waayihiisii ​​lumay walaal iyo aabbe’.
Laakiin saxafiga ayaa ku dooday dacwada Duke of Cambridge ee ah inuu huriyay go’doominta Diana iyo jahwareerka, isagoo leh: ‘Xitaa horaantii 1990-meeyadii, waxaa jiray sheekooyin iyo wicitaano qarsoodi ah oo qarsoodi ah.
Anigu ma ihi isha mid ka mid ah taas.
In kasta oo Bashiir ku guuldareystay inuu raaligelin ka bixiyo wixii uu Lord Dyson ku magacaabay ‘dabeecad xumo iyo daacad-darro’, wuxuu sheegay inuu ka xun yahay muujinta bayaanno bangi oo been abuur ah oo uu u diray Earl Spencer.
‘Sida iska cad waan ka qoomameynayaa, waxay ahayd qalad. Laakiin waxba kuma yeelanayn. Wax saameyn ah kuma lahan [Diana], wax saameyn ah kuma lahan wareysiga. ‘
Waxay ahaayeen hadaladaas – qaar ka mid ah oo si khaldan u soo jeediyay madaxii hore ee nabadgelyada ee Earl Spencer Alan Waller inuu ku jiray mushaharka saxafiyiinta tabliiqa – taas oo ka dhigtay inuu la xiriiro Diana.
Nashqadeeyaha sawir gacmeedka Matt Wiessler – oo sameeyey been abuurka – ayaa ku foodhiyey seeriga Bashiir kadibna waxaa laga mamnuucay BBC.
Weriyaha xishoodka leh ayaa raaligelin ka bixiyay inuusan u dhowaan Mr Wiessler ka dib markii uu helay jawaan, isagoo leh: ‘Waan ka xumahay taas.’
Wuxuu u sheegay wargeyska: ‘Marnaba ma aanan dooneynin inaan waxyeello u geysto Diana, mana aaminsani inaan sameynay.
Wax walba oo aan ku sameynay dhanka wareysiga waxay ahaayeen sidii ay dooneysay, laga soo bilaabo markii ay dooneysay inay feejignaato qasriga, ilaa iyo goorta la baahiyay, iyo waxa ku jira … Aniga iyo qoyskeyga waan jeclaan jirnay.
Bashiir wuxuu sheegay in isaga iyo qoyskiisuba ay ku sii dhawaadeen Diana wareysiga kadib.
Wuxuu la wadaagay sawirka amiirad booqatay isbitaalka St George ee magaalada Tooting, koonfurta London, maalintii ay xaaskii Bashiir Deborah dhashay cunugii saddexaad ee lammaanaha, Eliza.
Wuxuu u sheegay The Sunday Times: ‘Waxaan ahayn saaxiibo. Waxay ahayd mid cajiib ah.
Waxay igu tiri: “Waa inaad ii sheegtaa daqiiqadda uu ilmuhu yimaaddo,” saacad ka dibna, waxaa lagu garaacay qolka dhalmada, wayna socotaa. ‘
Diana walaalkeed Earl Spencer ayaa sheegay inuu ‘xariiqayo’ inta udhaxeysa wareysigii 1995 iyo dhimashadii walaashiis ee lagu dilay Paris 1997, isagoo sheegay in ficilada Bashiir ay keentay inay ka tanaasusho faahfaahinteeda amniga boqortooyada
Isaga oo muujinaya is qoomamayn layaableh, wuxuu yidhi: ‘Ma dareemayo in layga qaadi karo masuuliyada waxyaabo badan oo nolosheeda ka socday, iyo arimaha murugsan ee ku xeeran go’aamadaas.’
Wuxuu qirtay inuu fahmay carada Earl Spencer laakiin wuxuu diiday ‘wax yar oo aan macquul ahayn’ isku daygiisa ah inuu sii daayo geerida walaashiis iyo xiriirka ka dhexeeya qoyska Royal iyo warbaahinta garbihiisa.
‘Soo jeedinta aan kaligey masuulka ka ahay waxaan u maleynayaa inay tahay wax aan macquul aheyn oo aan cadaalad aheyn,’ ayuu yiri.
Bashiir wuxuu u xilsaaray dukumiintiyo muujinaya in lacag lagu shubo akoonada bangiyada ee xubnaha qoyska iyo inuu tuso Earl Spencer, sida uu qabo Lord Dyson.
Wuxuu yiri: ‘Sida iska cad waan ka qoomameynayaa, waxay ahayd qalad. Laakiin waxba kuma yeelanayn. Wax saameyn ah kuma lahan [Diana], wax saameyn ah kuma lahan wareysiga. ‘
Wuxuu sheegay inuu hada ka walwalsan yahay in fadeexada ay hadheyn doonto waxa ay Diana ku sheegtay wareysiga.
Waxay ahayd amiirad hormood ah. Markaad ka fikirto muujinta murugada ka muuqata guurkeeda, markaad ka fikirto gelitaanka cudurka dhimirka – waa wax aan caadi ahayn! Wiilasheeduna waxay aadeen caafimaadka maskaxda, ‘ayuu yidhi.
‘Ma fahmin ujeedka tani waa ugu dambeyn? Hagaag, malaha waxaad dooneysaa inaad aniga i baabiiso, laakiin tan tan ka baxsan, waa maxay ujeedku?
‘Wax qalad ah ayaan sameeyay … laakiin naxariista aawadeed, qir wax ka mid ah xiriirka naga dhexeeya iyo wax ay ku biirisay wareysigaas.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu murugada badan ee ku saabsan waxaas oo dhan waxay ahayd qaabkii ay u dhowaatay in la iska indhatiro waxyaabaha ku jira waxay tiri
Hadalka Bashiir ayaa yimid kadib markii agaasimihii guud ee hore ee BBC Lord Tony Hall uu iska casilay gudoomiyenimada National Gallery ka dib markii si weyn loogu dhaliilay warbixinta Dyson ee ku saabsan baaritaanka uu ku sameeyay sida wareysiga loo helay.
Iscasilaadiisa ayaa timid kadib markii sarkaal kale oo hore uga tirsanaan jiray BBC oo ku lug lahaa baaritaanka gudaha ee 1996, Tim Suter, uu jimcihii ku dhawaaqay inuu ka tagayo shaqadiisii ​​gudiga ee uu ilaalin jiray ilaalada warbaahinta ee Ofcom.
Earl Spencer ayaa lagu soo waramayaa inuu warqad u qoray Taliyaha Booliska Metropolitan Dame Cressida Dick kana codsanayo inay baarto BBC.
Scotland Yard ayaa horay u sheegtay inay qiimeyn ku sameyn doonto natiijada Lord Dyson si loo ogaado inay ku jiraan ‘cadeymo cusub oo muhiim ah’.
Lord Hall – oo ahaa agaasimaha warfaafinta BBC-da iyo arrimaha hadda socda – ayaa hoggaaminayay baaritaanka lagu sii daayay Bashiir, inkasta oo uu horay u qirtay inuu ka been sheegay dukumiintiyada been abuurka ah ee uu ku isticmaalay wareysiga.
Wuxuu agaasime guud ahaa markii Bashiir ay BBC-du dib uheshiisiisay inuu yahay weriye arrimaha diinta ah markii dambena loo dallacsiiyay tifaftiraha diinta.
Gudoomiyaha Gudiga Dijital, Dhaqanka, Saxaafada iyo Cayaaraha Commons Julian Knight ayaa ugu baaqday agaasimaha guud ee hada Tim Davie inuu sharaxaad buuxda ka bixiyo sida Bashiir dib loogu shaqaaleeyay.
Mr Knight wuxuu sheegay in dadka qaarkii ay ka shakiyi karaan in weriyaha la siiyay shaqada diinta si uu uga aamuso wixii uu ogaa.
Wuxuu u sheegay BBC Radio barnaamijka maanta ee BBC-da inay BBC-da hadda ka fiirsato inay magdhow siiso ‘kuwa wax sheega’ ee shaqooyinkooda waxyeello soo gaadhay ka dib markii ay ka walaaceen sida Bashiir u hawlgalay.
Mr Knight wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dib u habeyn dheeri ah lagu sameeyo BBC-da, wuxuuna ku baaqay in la xoojiyo siyaasada tifaftirka ee shirkada.
Mr Davie ayaa warqad u qoray shaqaalaha BBC jimcihii isagoo leh: ‘Waan ogahay in hada aan hakinay geedi socod aad u xoog badan iyo maamul si loo hubiyo in munaasabadan oo kale aysan markale dhicin Si kastaba ha noqotee waa inaan sidoo kale baranno casharro oo aan sii wadno horumarka. ‘
Atletico Madrid beats rival Real Madrid to win its first La Liga title since 2014